Hate Crime စောင့်ကြည့်ရေး Archives - Page6of6- News @ M-Media
မွတ်စလင်မ်အယောင်ဆောင် တို့ရဲ့ www.myanmarmuslim.co.cc Blog ဘာလဲ? ဘယ်လဲ?
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ နာမတော်ဖြင့်အစပြုပါ၏။ ချီးမွမ်းခြင်း အပေါင်းသည် ထိုအရှင်မြတ်အတွက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ အရှင့်ထံတော်မှ ငြိမ်းချမ်းသာယာမှုအပေါင်း နောက်ဆုံးနှင့် အမြင့်မြတ်ဆုံး တမန်တော်ဖြစ်တော်မူသော မုဟမ္မဒ်သခင်(ဆွ) အပေါ်သို့ကျရောက်တော်မူပါစေ။ ထို့ပြင် ကိုယ့်တော်၏ အိမ်တော်သူ အိမ်တော်သားများနှင့် တပည့်သာဝက အပေါင်းတို့ အပေါ်သို့လည်း[Read More…]
October 9, 2011 — Hate Crime စောင့်ကြည့်ရေး, ပြည်တွင်း